Miarahaba ny American Airlines sy Qantas ny seranam-piaramanidina DFW noho ny fankatoavana ny fifanarahana orinasa iraisana
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Miarahaba ny American Airlines sy Qantas ny seranam-piaramanidina DFW noho ny fankatoavana ny fifanarahana orinasa iraisana
Ny seranam-piaramanidina Dallas Fort Worth International (DFW) dia miandrandra ny fifamatorana misy eo amin'ny American Airlines sy Qantas ankehitriny fa nekena ny fifanarahana ara-barotra iraisan'izy ireo
Ny seranam-piaramanidina Dallas Fort Worth International (DFW) dia miandrandra ny fifamatorana misy eo amin'ny American Airlines sy Qantas ankehitriny satria neken'ny manampahefana federaly ny fifanarahana ara-barotra iraisan'izy ireo.
"Ny seranam-piaramanidina DFW dia nanitatra ny fifantohany amin'ny toeran-tany iraisampirenena tao anatin'ny folo taona lasa, ary ity fifanarahana fandraharahana iraisana ity dia mifanaraka tsara amin'izany, miaraka amin'ny safidy mora kokoa sy safidy maro ho an'ny mpanjifa izay mifandray amin'ny seranam-piaramanidintsika," hoy i Sean Donohue, Tale jeneralin'ny seranam-piaramanidina DFW. . “Faly izahay mahita fa nekena io fifanarahana io. Misy fanampiana marobe avy amin'ny tompon'andraikitra amin'ny seranam-piaramanidina, ny mpitondra fizahantany, ny fikambanam-barotra ary ny orinasa any Texas Avaratra sy manerana an'i Aostralia. ”
Amin'ity herinandro ity, ny Seranam-piaramanidina DFW dia mitarika delegasiona mankany Sydney sy Brisbane. Donohue, Ben'ny tanànan'i Fort Worth, Betsy Price, ben'ny tanànan'i Dallas Mike Rawlings, filohan'ny birao ao amin'ny seranam-piaramanidina DFW William Meadows ary mpitarika hafa any Texas avaratra dia handray anjara amin'ny fivoriana miaraka amin'ireo mpitantana fiaramanidina, mpiara-miombon'antoka amin'ny varotra sy fizahan-tany, mpitondra fanjakana ary olo-manan-kaja.
Ny fifanarahana napetraky ny Departemantan'ny fitaterana (DOT) amerikana tamin'ny 3 Jona, dia hanampy amin'ny fitazonana ny serivisy trans-Pasifika, toy ny sidina Qantas Sydney-Dallas Fort Worth tsy miato, ary koa hanamora ny fandefasana zotra vaovao avy any Etazonia mankany Australia, hoy ireo zotram-pitaterana an'habakabaka.
Nandritra ny fandefasan'izy ireo ny DOT, amerikana sy Qantas dia nilaza fa ny orinasa iraisana dia hamokatra 300 tapitrisa dolara ny tombotsoan'ny mpanjifa avy amin'ny fifandraisana bebe kokoa sy ny kilasy fihenam-bidy eo anelanelan'i Amerika Avaratra, Aostralia ary New Zealand. Ny volavolan-dalàna dia mety hiteraka dia 180,000 isan-taona, hoy ireo mpitatitra.
Amin'izao fotoana izao, i Aostralia dia mpiara-miombon'antoka faha-17 lehibe indrindra an'ny DFW amin'ny volavola ary mpiara-miombon'antoka faha-21 lehibe indrindra amin'ny sanda. Ny tetik'asa Dallas sy Fort Worth Chambers of Commerce dia hiitatra amin'ny ho avy, satria ny fankatoavana an'ity fifanarahana orinasa ity dia manome fotoana fanampiny ho an'ny entam-barotra sy serivisy.
Ny seranam-piaramanidina DFW dia notoloran'ny Qantas Airways nanomboka tamin'ny 2011, izay manome fifandraisana vaovao eo amin'ny sehatry ny asa aman-draharaha sy ny varotra ary ny fifandraisana misy eo amin'i Australia sy North Texas. Qantas dia mpikambana mpanorina ny fiaraha-miasa oneworld miaraka amin'ny American Airlines, izay mitazona ny foibeny lehibe indrindra ao amin'ny DFW Airport. Ny sidina DFW-Sydney dia miasa amin'ny Airbus A380-800.